Vashandi veHurumende - Huaihai Holding Boka
Iyo bumbiro revanhu
Huaihai International Development Corporation iri mubatsiri weHaiihai Holding Group. Kambani yedu iri paXuzhou Economic and Technological Development Zone (National Level) Huaihai Zongshen Industrial Park. Isu tiri kambani yemarudzi mazhinji inoshanda mukuvandudza nekutsvaga, kugadzira, kutengesa uye network network ye midhudhudhu, mota yemagetsi uye accessories. Zvigadzirwa zvedu zvinonyanya kutumirwa kune dzinopfuura nyika makumi matanhatu nenzvimbo dzakaita se Africa, Asia, uye South Africa, nezvitengeswa kunze kwenyika zveUS $ 50 millon. Kambani yedu inonamira kune "pabhandi, mugwagwa mumwe, kusimudzira kwekunze" zano, kambani yedu inotora yakazvimirira brand uye yakakwana nzira yekutengesa seyakanaka mukana. Mumakore anotevera 2-3, tichavaka 3-5 zvigadzirwa zvekugadzira zvigadzirwa uye mahofisi anopfuura gumi kuti zvive bhizinesi rekuita bhizinesi muChina.
Nemusoro werunyararo nebudiriro, nyika iri kuramba ichikwikwidza muhupfumi nesainzi uye tekinoroji. Mukuwedzera kukura kwehupfumi pamusika nharaunda, kukwikwidza kwepasi rose pakati pemabhizinesi, mune yekupedzisira kuongororwa ndeyehungwaru hwehungwaru hwevanhu, ndiko kwakazara kwevashandi uye hwevashandi vevanhu kuvandudza uye nhanho yemanagement yemakwikwi. Iyo tarenda ndiyo yakakoshesa bhizinesi, ndiyo inonyanya kukosha sosi uye zvinosimbisa zvekupona nekusimudzira bhizinesi. Kune rimwe nerimwe maBhizinesi ari kuvandudza nekukurumidza uye nekushingaira mumakwikwi epasi rese anofanirwa kutarisa zviwanikwa zvekuvandudza hupfumi pakubata kwakanaka uye kusimudzira kwevanhu zviwanikwa nezivo ruzivo.
The manejimendi vashandi mune Huaihai kuomerera kune pfungwa yehupfumi hwemusika uye kupa vimbiso yekukurumidza kukurumidza kweHaiihai.
Ndokumbira utumire CV yako ku huaihaihaiwai@126.com
Zvekunze maneja maneja
Iine anopfuura makore matatu 'anoshanda ruzivo rwekutengesa kutengesa, uchiziva maitiro ekutengeserana kwekunze
Yakanakisa timu yekudyidzana mweya, kugona kwakasimba kugona, dhigirii yekusangana kana pamusoro, vakapedza kudzidza kubva kuChirungu chikuru, kutengeserana nedzimwe nyika majorm, kushambadzira hukuru kana bhizinesi rekutonga kukuru.
CET6 kana pamusoro.
Kuyambuka-kumuganhu e-commerce mashandiro
Kuziva nharaunda yekushanda uye yekutengesa mitemo yekambani yekutengesa online chikuva.
Iine hunyanzvi mumitemo yakapfava, yekutsinhana mawebhusayithi, kusimudzira email, SNS kukurudzira, BBS kukurudzira uye dzimwe nzira dzekusimudzira.
Yakagadzirirwa neruzivo rwekutanga rwechirungu.
Anenge makore matatu ruzivo mukutengesa-tengesa kunze kwenyika mukutengesa kwekunze.
Koreji degree kana pamusoro, chinja kune yenguva refu yekushanda mamiriro kunze kwenyika.
Yakagadzirirwa neruzivo rwechirungu rwechokwadi.
Makore matatu ezviitiko ruzivo rwezvipfeko manejimendi ekunze ekutengesa.
Koreji dhigirii kana pamusoro, yakashongedzwa neashoma eunyanzvi ekunyora.
Zvinyorwa uye zvinhu zvemitengo
Makore matatu ezviitiko ruzivo rwezvinyorwa uye zvetsika zvakabatana mukambani yekutengeserana kwekunze.
Bachelor degree kana pamusoro, internation kutengeserana kukuru, bhizinesi manejimendi, CET4 kana pamusoro.
Anopfuura makore matatu 'achishanda akajeka emari mumakina mekutengesa kana vekunze indasitiri, inoziva nemari yepasirose, mutero, nezvimwe.
Koreji dhigirii kana pamusoro ane makuru mu accounting uye zvemari manejimendi.
Iye ane ruzivo mukugadzirisa kwemitengo anosarudzwa.